भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई पाकिस्तानी समकक्षीले पठाएको पत्रमा के छ ? — Imandarmedia.com
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई पाकिस्तानी समकक्षीले पठाएको पत्रमा के छ ?
एजेन्सी। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले आफ्ना भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले दुई देशबीचका बाँकी मुद्दाहरूको शान्तिपूर्ण समाधानमा जोड दिएका छन्।
सरिफले एउटा पत्र लेखेर मोदीलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन्। यसअघि मोदीले पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएकोमा शहबाज सरिफलाई बधाइ दिँदै पठाएको पत्रको जबाफमा सरिफले पनि पत्र पठाएका हुन्।
पत्रमा सरिफले अर्थपूर्ण भारत–पाकिस्तान सम्बन्धबाट दुई देशका जनता र क्षेत्रको सामाजिक–आर्थिक विकास हाँसिल गर्न सकिने बताएका छन्। अर्थपूर्ण सम्बन्धबाट नै जम्मू र कश्मीरसहित सबै बाँकी विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधान हुने प्रधानमन्त्री सरिफले आशा गरेका छन्।
शरीफले पाकिस्तान र भारतबीचको ‘शान्तिपूर्ण र सहयोगी’ सम्बन्ध दुई देश र क्षेत्रका जनताको सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि आवश्यक रहेको बताए।
सार्थक वार्ता र जम्मु तथा कश्मीरको मूल मुद्दासहित सबै बाँकी विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधानमा सरिफले जोड दिएका छन्। त्यस्तै केही दिनअघि सरिफलाई पठाएको पत्रमा मोदीले भारत पाकिस्तानसँग रचनात्मक सम्बन्ध चाहेको बताएका थिए।
यस्तै सरिफले आफू क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। इमरान खानमाथि संसदमा पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि ११ अप्रिलमा शहबाज सरिफ नयाँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए।